စိတ်မာ၊ အကြောမာတဲ့ သမီးလေး လဝန်းမေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါလို့ ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ သက်မွန်မြင့် - Cele Connections
စိတ်မာ၊ အကြောမာတဲ့ သမီးလေး လဝန်းမေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါလို့ ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ သက်မွန်မြင့်
ပရိသတ်တွေအရမ်းချစ်ကြတဲ့ ဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး သက်မွန်မြင့်ကတော့ သူမကို အရမ်းချစ်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရယ်၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးနဲ့ သမီးလေးရယ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ကံကောင်းမှုတွေရှိတဲ့ သက်မွန်မြင့်က သားသမီးတွေ ပိုင်ဆိုင်လာချိန်မှာလည်း သူမအပေါ် အရမ်းချစ်ပြီး သိတတ်လိမ္မာတဲ့ သားသမီးလေးတွေအကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
“ကိုယ့်မှာ စိတ်မာ အကြောမာ အမေကို အရမ်းချစ်တဲ့ သမီးလေးရှိတာ ကံကောင်းမှုထဲက တခုပါပဲ! နေတွေမကောင်း စိတ်ကျပြီး ဝမ်းနည်းလို့ မျက်ရည်ကျချိန် မေမေ ဘာလို့ငိုတာလဲ။ သမီးဘာလုပ်ပေးရမလဲနဲ့ တစ်ရှုးပြေးယူပြီး သုတ်သုတ်ပေးတာ.. အာဘွားတွေ ပေးတာ.. သူတို့လေးတွေနဲ့ ရှင်သန်ရတယ်။ သူတို့ဘဝလေးတွေ လှပဖို့ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ကျေပွန်ဖို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရဦးမယ်.. 💪🏻💪🏻💪🏻 ကပ်ကြီး မြန်မြန်ပြီးပါစေ ကမ္ဘာကြီး မြန်မြန် ကျန်းမာပါစေ။ နေလေးထွက်လာတုန်း အပင်တွေ အကုန် နေပြချိန် အမြန်ပြေးရိုက်ခြင်း အမှတ်တရ.. မိတ်ကပ်လိမ်းချိန်တောင်မရ😂😂” ဆိုပြီး သူမတို့ သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။
သက်မွန်မြင့်ကတော့ သူမကို အရမ်းချစ်ပြီး မျက်နှာတကြည့်ကြည့်နေတတ်တဲ့ သမီးလေး လဝန်းမေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုသလို ရင့်ကျက်ပြီး အဖေတူတဲ့ သားလေး အားချစ်ကြောင့်လည်း စိတ်ချမ်းသာရတာ အမှန်ပါပဲ။ သက်မွန်မြင့်တို့ မိသားစုလေး ဒီထက်မက ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Thet Mon Myint ‘s fb
စိတျမာ၊ အကွောမာတဲ့ သမီးလေး လဝနျးမကေို ပိုငျဆိုငျထားရတာ ကံကောငျးခွငျးတဈခုပါလို့ ဖှငျ့ဟပွောပွလာတဲ့ သကျမှနျမွငျ့
ပရိသတျတှအေရမျးခဈြကွတဲ့ ဝါရငျ့အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး သကျမှနျမွငျ့ကတော့ သူမကို အရမျးခဈြတဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူရယျ၊ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားလေးနဲ့ သမီးလေးရယျနဲ့အတူ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျရေးမှာလညျး ကံကောငျးမှုတှရှေိတဲ့ သကျမှနျမွငျ့က သားသမီးတှေ ပိုငျဆိုငျလာခြိနျမှာလညျး သူမအပျေါ အရမျးခဈြပွီး သိတတျလိမ်မာတဲ့ သားသမီးလေးတှအေကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောလာပါတယျ။
“ကိုယျ့မှာ စိတျမာ အကွောမာ အမကေို အရမျးခဈြတဲ့ သမီးလေးရှိတာ ကံကောငျးမှုထဲက တခုပါပဲ! နတှေမေကောငျး စိတျကပြွီး ဝမျးနညျးလို့ မကျြရညျကခြိနျ မမေေ ဘာလို့ငိုတာလဲ။ သမီးဘာလုပျပေးရမလဲနဲ့ တဈရှုးပွေးယူပွီး သုတျသုတျပေးတာ.. အာဘှားတှေ ပေးတာ.. သူတို့လေးတှနေဲ့ ရှငျသနျရတယျ။ သူတို့ဘဝလေးတှေ လှပဖို့ အမတေဈယောကျရဲ့ တာဝနျဝတ်တရားတှေ ကပြှေနျဖို့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှနေဲ့ ပွုစုပြိုးထောငျပေးရဦးမယျ.. 💪🏻💪🏻💪🏻 ကပျကွီး မွနျမွနျပွီးပါစေ ကမ်ဘာကွီး မွနျမွနျ ကနျြးမာပါစေ။ နလေေးထှကျလာတုနျး အပငျတှေ အကုနျ နပွေခြိနျ အမွနျပွေးရိုကျခွငျး အမှတျတရ.. မိတျကပျလိမျးခြိနျတောငျမရ😂😂” ဆိုပွီး သူမတို့ သားအမိနှဈယောကျရဲ့ အမှတျတရပုံလေးတှကေို မြှဝပေေးထားပါတယျ။
သကျမှနျမွငျ့ကတော့ သူမကို အရမျးခဈြပွီး မကျြနှာတကွညျ့ကွညျ့နတေတျတဲ့ သမီးလေး လဝနျးမကေို ပိုငျဆိုငျထားရတာ ကံကောငျးတယျလို့ ဆိုသလို ရငျ့ကကျြပွီး အဖတေူတဲ့ သားလေး အားခဈြကွောငျ့လညျး စိတျခမျြးသာရတာ အမှနျပါပဲ။ သကျမှနျမွငျ့တို့ မိသားစုလေး ဒီထကျမက ပြျောရှငျမှုတှေ ရရှိပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ပဲရစ်မြို့ကို ဖျော်ဖြေရေးသွားခဲ့စဉ်အချိန်က နေတိုးနဲ့ ရဲလေးတို့ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ပြင်သစ်ဘာသာစကားဗီဒီယိုကို မျှဝေပေးလာတဲ့ မိုးမိုး
” လင်းလင်းအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းအပြင်တစ်သက်တာမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ချစ်စဖွယ်ပြောလာတဲ့ ချစ်သုဝေ”
ပျင်းလွန်းလို့ ရူးတော့မယ်ဆိုပြီး ငြီးတွားတဲ့ ချစ်ဇနီးကို ပျင်းတယ်ဆိုတိုင်း အိမ်ကအမျိုးသားကို ဘူလီမလုပ်ဖို့ ပြောလာတဲ့ ရွှေထူး
ရပ်ကွက်ထဲမှာ မီးပုံးလေးတွေတွန်းပြီး ကလေးလို လျှောက်ဆော့နေကြတဲ့ မအေးသောင်းတို့ညီအစ်မကို ဆေးကြီးကြီးထိုးစနောက်ခဲ့တဲ့ G Fatt